CPC နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးပါတီများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ရှီ၏ မိန့်ခွန်းကို ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေ - Xinhua News Agency
CPC နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးပါတီများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ရှီ၏ မိန့်ခွန်းကို ဘာသာစကားနှစ်မျိုးဖြင့် ထုတ်ဝေ
ပေကျင်း၊ နိုဝင်ဘာ ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ (CPC) ဗဟိုကော်မတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ရှီကျင့်ဖိန် က CPC နှင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေးပါတီများ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည့် မိန့်ခွန်းကို တရုတ်ဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးဖြင့် Foreign Languages Press မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ယင်းအား ပြည်တွင်းသာမက ပြည်ပတွင်ပါ ဖြန့်ချိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီက ဇူလိုင် ၆ ရက်က ပေကျင်း၌ ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှီက ၎င်း၏မိန့်ခွန်းတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီများသည် လူသားမျိုးနွယ် တိုးတက်မှုနောက်ကွယ်တွင် အရေးပါသော အင်အားစုတစ်ရပ်အနေဖြင့် မှန်ကန်သောလမ်းစဉ်ကို ချမှတ်ကာ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်စားပြုပြည်သူများ၏ ကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့် လူသားမျိုးနွယ်တိုးတက်မှု ရရှိစေရေးအတွက် ၎င်းတို့၏ သမိုင်းပေးဝင်တာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
CPC သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်သူ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကူညီပံ့ပိုးပေးသူနှင့် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကို ကာကွယ်သူဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားထားသည်။ (Xinhua)
Bilingual version of Xi’s speech at CPC and World Political Parties Summit published
BEIJING, Nov.5(Xinhua) — A Chinese and English bilingual version ofaspeech delivered by Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee, at the CPC and World Political Parties Summit has been published by the Foreign Languages Press.
It will be distributed at home and abroad.
Xi, also the Chinese president, gave the speech via video link in Beijing on July 6.
In his speech, Xi stressed that political parties, as an important force behind human progress, need to set the right course and shoulder their historical responsibilities to ensure the well-being of the people they represent and pursue human progress.
Xi said the CPC is willing to work with political parties around the world and is committed to beabuilder of world peace,acontributor to global development, andadefender of the international order. Enditem
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံတွင် အဆောက်အအုံပြိုကျမှုကြောင့် သေဆုံးသူ ၃၈ ဦးအထိ မြင့်တက်လာ
Airbus က ထျန်းကျင်းမြို့တွင် A321 လေယာဉ်ထုတ်လုပ်မည်